सम्बन्ध सुधार्न साउदी अरब र इरानबीच पुनः सुरु भयो छलफल
साउदी अरब र इरान क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी हुन् । पछिल्लो केही समयमा सम्बन्धमा सुधारका लागि दुई देशले एकपटक पुनः कुराकानी सुरु गरेका छन् । यद्यपि, यसको आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन । तर एक इरानी न्युज वेबसाइटले बगदादमा यो कुराकानी भएको बताएको छ ।इरान र साउदी अरबबीच थुप्रै मामिलामा मतभेद छ र थुप्रै क्षेत्रीय संघर्षको घटना र राजनीतिक विवादमा दुबै एक–अर्काका विरोधी हुन् । दुबै देशले आपसी तनाव कम गर्नका लागि अघिल्लो वर्ष सिधा छलफल सुरु गरेका थिए ।इरानले यो कुराकानीलाई कुनै कारण नै नब
दोहा– नेपाली श्रमिकको श्रम गन्तब्य रहेको साउदी अरेबिया र युएईमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फेला परेको छ । साउदी अरेबियाले एक जनामा ओमिक्रोन संक्रमणको पुष्टि भएको जनाउदै ती व्यक्तिलाई अलग गरेको जनाएको छ । त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार रियादमा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मुहम्मद अल-अब्देल अलीले उत्तर अफ्रिकी देशबाट फर्किएका […]
गैरकानूनीरुपमा साउदी छिर्न खोज्ने ७ यमनी मारिए, कम्तीमा २६ जना घाइते
साउदी अरब छिर्न खोज्ने सात जना यमनी आप्रवासी साउदी अरबको सीमाक्षेत्रमा मारिएका छन् । ती आप्रवासीहरु जबर्जस्ती साउदी अरब छिर्न खोजेको बताइएको छ । सीमा सुरक्षा बल र हुथीबीचको भिडन्तमा क्रसफायरमा परेर ती आप्रवासीहरु मारिएका बताइएको छ । शुक्रबार यमनको मोनाबिह जिल्लामा ती आप्रवासी मारिएका हुन् । सीमामा पर्ने सो उपत्यकाबाट उनीहरु साउदी अरेबिया जान […]
तालिबान सत्तामा आएपछि पहिलो पटक बोल्यो साउदी अरब
साउदी अरबले अफगानिस्तामा तालिबानको अन्तरिम सरकारबारे पहिलोपटक प्रतिक्रिया दिएको छ ।साउदी अरबका विदेशमन्त्री प्रिन्स फैलि बिन फरहानले भने, ‘हामी आशा गर्छौं कि तालिबान र सबै पक्ष शान्ति र सुरक्षाका लागि काम गर्नेछन् ।’प्रिन्स फैसलले भने, ‘साउदी अरब आशा गर्छ कि अफगानिस्तानको कार्यवाहक सरकार सही दिशामा काम गर्नेछ र मानिसहरुलाई हिंसा, अतिवादको मुक्ति दिलाउनेछ ।’उनले साउदी अरब अब अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरताको आशा गर्ने बताएका छन् । साउदी अरबको सरकारी समाचार एजेन्सी साउदी प्र
नेपालबाट चार्टड विमानमार्फत् पाँचसय भारतीय साउदी अरब जाँदै
काठमाडौं : निषेधाज्ञाले नेपालमा रोकिएका भारतीय नागरिकलाई चार्टर विमानमार्फत् उनीहरुको गन्तव्यस्थल साउदी अरब लगिँदैछ। आज र भोलि गरी नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलायन्सका पाँच वटा उडान मार्फत् साउदी अरब पुर्‍याउन लागिएको नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आज र भोलि गरी नेपाल एयरलाइन्सले २ र हिमालय एयरलाइन्सका विमानले ३ वटा उडान गर्नेछन्। भारतीय दूतावासको आग्रह गरेपछि नेपालमा अड्किएका भारतीय नागरिकलाई साउदी अरब पुर्‍याइदिन ला
भारत–पाकिस्तान तनावबारे के भन्छ साउदी अरब?
एजेन्सी। साउदी अरबले भारत–पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताएको छ। साउदीका विदेशमन्त्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान अल साउदले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले हालै गरेको साउदी भ्रमणका बेला यस्तो धारणा राखेका हुन्। दुई देशबीचको सम्बन्धबारे उनले सरकारी मिडियासँग कुरा गर्दै भने, ‘‘पछिल्ला दिनमा दुई देशबीच तनाव कम भएको छ, युद्धविराम भएको छ। यो राम्रो हो।’’
साउदी अरब र इरानबीच वार्ता, के हो उद्देश्य ?
कट्टर दुश्मन रहिआएका साउदी अरब र इरानका वरिष्ठ अधिकारीहरूबीच पाँच वर्षमा पहिलोपटक प्रत्यक्ष कुराकानी भएको छ । यो वार्ता इराकको राजधानी बग्दादमा भएको र सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरिएको बताइएको छ । पश्चिम एसियाका यी महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूले पाँच वर्षअघि कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका थिए । फाइनान्सियल टाइम्सको समाचारअनुसार, साउदी अरब र इरानबीचको कुराकानीका लागि इराकका प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कदिमीले माहौल मिलाएका हुन् । अहिले साउदी अरब यमनमा नराम्ररी फसेको छ र त्यहाँ उसले इरानसमर्थक हूती विद्रोहीको सामना...